Mpitoraka blaogy Maraokana, Toniziana, be no mampita ny zera baomba ao: ‘Ny tsy manantsiny no mandoa ny sarany [mitondra faisana]’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2009 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Italiano, English
Manohy hatrany ny fampitam-baovao momba ny zera baomba ataon'i Israely ao Gaza, ireo dikanteny avy amin'ny hafatra nosoratan'ireo mpitoraka blaogy ao Maraoka sy Tonizia dia samy mitantara momba ny herisetra nitranga tsy ela akory izay.
Avy any Tanger, Maraoka, baraka dia mampahatsiahy fa baomba amerikana daholo ary nalatsaka avy amina fiaramanidina amerikana ireo tao Gaza. Kianiny i Eraopa sy Etazonia noho ny fanohanan'izy ireo an'i Israely, saingy mbola mavesatra sy mahakivy azy kokoa ny tsy fanehoan-kevitr'ireo governemanta arabo sasantsasany:
…Ny fahanginan'ireo mpitondra Arabo “tony fihetsika” izay [mahatonga itony fotoana matroka itony] ho ny tsy fahamendrehany [tsy fahamatorany]. Mandritra ny fotoana mahafaty ireo zanak'Arabo, mahapotika ireo toeram-pivavahana silamo [moske], fanaovana toeram-pitsaboana ho lasibatra, dia vavolombelon'ny zava-miseho hafahafa ihany isika. Ny fitondrana izay misora-tena ho mpiaro [mpiandry, mpiambina] ireo toerana masina [izany hoe, Arabia Saodita], izay milaza fa mijoro amin'ny maha-Arabo, miditra amina fiolakolahana mahamenatra. Ny fisalasalan'ny Ejyptiana momba ny hanokafana ny lala-manivaka ny Sisintany ao Rafah dia hitoetra ho rakitry ny tantara ho toy ny fotoan-tsarotra tsy maintsy lalovana raha havendranana sy hasarotan-tahotra no resahana.
Avy any Tonizia, Hou-Hou Blog no manoratra fa ny milin'ny fampielezan-kevitra israeliana arahana'ny fanohanana tsy misy fepetran'ireo tandrefana mpiara-dia aminy dia niteraka toe-javatra iray tsy ilàn'i Israely manao tatitra na amin'iza na amin'iza amin'izay ny anton'izay nataony.
Ny mpamolavola teti-panorona Israeliana momba ny fifandraisana, izany hoe, ny fampielezan-kevitra ara-miaramila sy diplaomatika, doa mamerina indray ny didrany fahiny, dia ilay noventiventesiny nandritry ny ady tany Libanona: tsy tsininay mihitsy izao, tsara fanahy anie izahay e, ary mokatsaka ny handry fahalemana, ry zareo no devoly fisainana, midaroka anay amin'ny rokety [roquettes], manohintohina ny filaminanay. Dia bla bla bla, efa haintsika loatra izay hirahira izay. Ary dia mandaitra tokoa aloha ilay izy e, farahafa-ratsiny amin-dry zareo Tandrefana izay toa ampifaliana aza no andraisan'ireo governemanta tandrefana ilay hafatra, indrindra fa i Kanada.
Dia tafita tokaoa aloha ny fahaiza-mandresy lahatr'i Israely, indrindra ho ana firenena manana tanjaka ara-tafika sy mahazo fanohanana avy amin'ireo mpanapa-kevitra eto amin'izao tontolo izao ka afaka hanao izay tiany tsy ilam-panazavana na tatitra na amin'iza na amin'iza.
…fa mba tokony hanana saina mahay mandinika kely ihany anefa mijery ny tena fandehan'ny raharaha. Mandraisa fotsiny olona an'arivony dia hidio amina faritra iray atao fehirano ry zareo, amina tany kely voahodidina amin'ny lafiny rehetra, tsy voavatsy rano, sakafo, fanafody, solika, famatsiam-bola, dia andraso volana vitsivitsy…
Au début était le Blog dia nisaina zavatra toy izany koa :
Rehareha toy inona no mety ho azo amin'ny fandarohana baomba ireo mponina sivily navangongo anatin'ny fonja lehibe indrindra manao tafo lanitra eto amin'ity tany ity, miaraka amin'ny fanohanan'ny fiara mifono vy, helikoptera [angidim-by] sy fiaramanidina hafa?
Kiffe Grave [Fr] dia nilaza fa hatramin'ny 1967, dia nampiasa ny vato tsy azo ivalozana ananany eo anivon'ny Filan-kevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana, efa ho in-39, i Etazonia ho fanoherana ny volavolam-pandaminana hanamelohana ani Israely.
Tsy dia hoe tsy manan-tsiny koa ny Hamas ao anatin'ity resaka ity, hoy i Hou-Hou . Samy azo kianina daholo ny andaniny sy ny ankilany, ary araka ny mahazatra, dia ny olon-tsotra hatrany no mizaka ny jaly:
Tsy tokony ho vendrana be koa isika na izany aza e. Tsy vao omaly akory ny Hamas no teraka. ny fetram-potoana napetraka ‘samirery’ ho fampitsaharana ny fifandonana ary mifanandrify indrindra amin'ny resa-pifidianana any Israely, dia tsy hoe tongatonga ho azy [tsy manan-tsiny]. Ara-pôlitika dia tsy manan-tsafidy ny Hamas, tsy maintsy nandranitra an'i Israely ry zareo, tsy maintsy natao izany na dia hitondrana sorona maro be tokoa aza. Amin'ny lafiny rehetra, tsy hisy fatiantoka ho azy, ankoatra ny ainy, ary ny fiainan'ireo Palestiniana (efa fantatsika loatra hoe ahoana ny ara-tsosialiny). Amin'ity indray mitoraka ity,dia mbola ny tsy mana-tsiny ihany, ireo olon-tsotra no tsy maintsy handoa be amin'izay lany amin'ny adin'ireao ao amin'ny fitondràna, noho ny foto-kevitra ijoroany. Efa maty sy nalevina ela olona ny fandriana fahalemana.
Matoo no mitondra valin-teny ao anaty fanamarihana iray:
Ny tena mampanahy ahy ao anatin'ity ‘tantara’ ity dia ny hoe 60 taona aty aoriana nisian'ny fifandonana, nisian-pahafatesana maro, fifanafihana, maritiora betsaka, ny tsara sitra-po sy ireo mpandàla ny fandriam-pahalemana avy amin'ny roa tonta, tsy hay intsony hoe iza no hinoana sy azo ametrahana fanantenana. Toy ny hoe hita ao amin'ny andaniny sy ny ankilany avy ny “zanaky ny helo” sy ny “tsara fanahy”, ary toy ny tsy azo saintsainina mihitsy ny hahita lalan-kivoahana tsaratsara kokoa.